Ireo mpanara-maso GPS tsara indrindra ho an'ny mararin'ny Dementia | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny aretina toy ny dementia dia afaka mamafa ny fahatsiarovan'ny olona iray sy ny manodidina azy ka tsy mahalala, ka sarotra aminy ny hizatra amin'ny tontolo vaovao. Ny fanakorontanana ny aretina dia miteraka fikoropahana, fiheverana mahazatra sy manan-danja ho an'ny olona izay mikarakara ireo olon-tiany ary manahy momba ilay marary miahiahy ho lasa matahotra sy very amin'ny toe-javatra samihafa.
Misy ihany ny vahaolana vitsivitsy hamahana ny fitetezana sy hahazoana antoka fa azo antoka sy antoka ny olon-tianao. Ampielezana ny GPS ankehitriny izao ho vahaolana amin'ny raharaha toy izao ary miely patrana ny fampiasana azy. Ireo fitaovana ireo dia mamela anao hahita ilay olona voakasika ary hanampy azy ireo mora.
Fa maninona no ilaina ny mpijery GPS ao amin'ny marary Dementia:
Amin'ny ampahany lehibe amin'ny olona iray tapitrisa ao UK izay manana demonia izay mipetraka ao an-tranony, mihoatra ny 40 isan-jato no very amin'ny farany, ary manodidina ny 25,000 dia hanjavona miverimberina hatrany, ary hampitombo ny loza ateraky ny fidirana amin'ny fikarakarana ela. Mampalahelo fa ny 50% tsirairay amin'ireo olona nanjavona mihoatra ny indray mandeha mandritra ny ora 24 dia mikapoka ny siny na tena sahirana tanteraka.
Na izany na tsy izany, manaiky ny mpahay siansa fa ny fampisehoana gadget rehefa misy olona voan'ny dementia dia manome lanja ny tombony sy ny valiny amin'ny fampitaovana ny gadget, ary mandritra ny vanim-potoana iray izay hahafahan'izy ireo ho lasa haingam-piasa amin'ny fampiasana gadget ka manjary lasa propensity, dia afaka miaro aina .
Ny fanadinana izay naseho tamina tatitra iray tany amin'ny Alzheimer Society, dia nitondra olona marary dementia, ny fianakaviany sy ireo mpikarakara miaraka amin'ny polisy, fototra ary ny mpahay siansa, hanombatombana ny filàna sy ny vokadratsin'ny GPS Trackers amin'ny fiainan'ny olona tsirairay.
Ny ampahany sasany amin'ny fizahana dia misy ny miresaka amin'ny olona voan'ny dementia nefa mandehandeha ao anaty tamba-jotra mampiasa ny faritra misy azy ireo mahita ny fitaovana, toy ny fivorian'ny fivoriana miaraka amin'ireo mpikarakara ny fianakaviana.
Dr. Ruth Bartlett, avy amin'ny University of Southampton, no nitondra ny famotopotorana ary nilaza hoe: "Miaraka amin'ny fanitarana olona marobe izay manana dementia miaina ao an-trano ary manitatra ny fankasitrahana sy ny fampiasana gadget vaovao, ny fampiasana ireo fanavaozana GPS (ankoatry ny hafa) dia mety ho manitatra haingana.
"Manana safidy izahay hanehoana fa ny olona nahita tombony eo noho eo amin'ny fampiasana ilay gadget dia voatery hampiasa azy io ary hanaja azy io amin'ny fampiasana azy. Na izany na tsy izany, ny olona tsy azo lavina dia mila fanampiana manokana hampiasaina fitaovana toy izany ary angona taonina dia azo alaina avy amin'ny fitsangatsanganana miaraka amin'ilay olona. Ny GPS dia tsy voaaro nefa afaka manampy amin'ny fitadiavana olona iray haingana sy miaraka amin'ireo andalana ireo izay mamonjy ain'olona. ”
Nanampy ny Dr. Bartlett fa ny fanomezana gadget faritra ho an'ny olona voan'ny dementia dia manome hery azy ireo hanana fahafahana misimisy kokoa ary malalaka kokoa rehefa manome fampiononana ho an'ny fianakaviany sy ny mpikarakara.
"Ny fanavaozana dia afaka manohana ny fianakaviana sy ny olona hanapa-kevitra amin'ny safidy nianarana mba hanamaivanana ny loza ateraky ny olona marary saina, ary koa mandinika ny fahalalahana hotehirizina ary hanome fiadanam-po ho an'ny mpikarakara.
"Ankoatr'izay, manana toerana tsara kokoa isika manana ny safidy hahita olona tsy hita izay mety hampidi-doza."
Matoky ny vondrona mpikaroka ao Southampton fa hitondra ny olana ny tatitra ataon'izy ireo raha ny tombotsoan'ny olona manana demementia manana GPS tracker ary hitarika ny fandraisana an-tanana amin'ny fampiasany ny olona sy ny fianakaviana.
Fijerena GPS Tracker:
Ankehitriny, GPS manaraka ny famantaranandro ho an'ny olon-dehibe dia mirakitra zava-dehibe be. Ireto misy tombony sasany:
Ny mpiambina dia afaka mahalala ny faritry ny zanany
Afaka mandefa krizy SOS ho an'ny fifandraisananao ianao, raha tsy miitatra firy
Afaka mamela anao hanaraka ny isan'ny dingana noraisinao izy io
Ireo gadget hendry ireo dia afaka manaraka ny antsipiriany momba ny fahasalamana mahazatra
Ny ampahany amin'ireto gadget ireto koa dia miaraka amin'ny fampisehoana manasongadina toy ny fampiharana amin'ny fiainana an-tserasera, fakantsary, antso an-telefaona, fampifandraisana an-telefaona, ary ny lanitra dia fetra avy any
GPS Miantso GPS Tsy An-kianjan'ny Waterproof GPS033W:
Raha mitady azo itokisana ianao fitaovana fanaraha-maso tena andavanandro ho an'ny zanakao, avy eo manoro hevitra izahay fa handeha amin'ny GPS033W. Ireo no tena vahaolana tadiavinao. Tena manintona ny ankizy izany ary azontsika antoka fa hankafizin'ireo zanakao ireo ny mitondra an'ireny smart smartches. Ireo làlam-pandiazana ireo dia namboarina niaraka tamin'ny fepetra fiarovana azo antoka mba hahazoana antoka tsara ny fiarovana ny zanany sy ny olon-tiany.
Hita ao amin'ny tsena ny vokatra ary miaraka amin'ireto manaraka izao Toetoetra:
APP finday na finday GPRS solosaina, samy fomba hifehy ny famantaranandro.
Pendants GPS Tracker:
GPS pender trackants dia natao ho an'ny zanakao, ny lehibe, ny fiara, ny biby fiompy sy ny sisa. Ny lokon'ny fanaraha-maso ny zaza GPS dia angamba ny tracker azo antoka indrindra amin'ny tsena. Ireto misy tombony sasany:
Fantaro foana amin'ny zavatra ataonao zanaka
Mandehana mandeha amin'ny fitaovana ho an'ny mpitia biby
Ataovy arovy ny zanakao
Azo ampiasaina ho valin'ny GPS fanaraha-maso ho an'ny zokiolona
GPS Pendant Tracker (Dementia Anti-panahy sy Ankizy) GPS014D:
Fitaovana tsotra sy tsy misy frills izay mitazona ny fototry ny fampahafantarana anao hoe aiza ny zanakao. Azonao atao ny mametraka geofences ary miaraka amin'ny fanairana SOS koa. Raha mitady vokatra mendrika ianao ho an'ny fanenjehana an-tsena amin'ny fotoana maharitra, Manoro hevitra ny fampiasana GPS014D izahay. Ny fitaovana koa dia miaraka amin'ny aleha ara-tantara.
Ny vokatra dia manana ireto endri-javatra manaraka ireto:
I pasi pasi
Fatran'ny bateria ambany
5360 Total Views 8 Views Today